अण्डामा किन रगतको थोप्ला हुन्छ ? खान मिल्छ कि मिल्दैन जानी राखौँ - ramechhapkhabar.com
अण्डामा किन रगतको थोप्ला हुन्छ ? खान मिल्छ कि मिल्दैन जानी राखौँ
बिहानको नास्ताका लागि यदि कुनै खानेकुरा खोज्ने हो भने सबैभन्दा पहिला अण्डाकै नाम आउँछ । विश्वमा नै बिहानको नास्ताका लागि स्वस्थबर्धक नास्ताको विकल्पमा अण्डालाई लिइन्छ ।
अण्डा स्वस्थबर्धकमात्रै नभइ स्वादिलो पनि हुन्छ । यसलाई फ्राइ, अमलेट, करीलगायत जस्तो सुकै तरिकाबाट विभिन्न परिकार बनाएर खान सकिन्छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि हिजोआज प्रदुषण तथा मिसावटको प्रभाव हरेक चिजमा पर्न थालेको छ । र, यसमा अण्डा पनि अछुतो छैन ।
छिटोछिटो पिसाब लग्छ ? सावधान, यी रोगको लक्षण हुनसक्छ?